Sidee u iibsadaan steroids anabolic -An Raw
Waad ku mahadsan tahay nala soo xiriir! Waan kula soo xiriiri doonaa wax yar, ku noqo guriga bog ama arag dheeraad ah wax soo saarka.
Ma tahay shirkad ama shirkad ganacsi?
Fadlan soo dir liiska iibsashada liiska rasmiga ee emailka ([Email ilaaliyo]) iyo qadarin ayaa la bixin doonaa, oo ay weheliso mudada bixinta.
Bixinta lacag bixinta iyo qaataha qadarka iyo cinwaanka la bixiyo.
Alaabta waxaa la siin doonaa lambarka raadinta, sawirka xirmada, lambarka raadraaca iyo taariikhda la qiyaasay.
Alaabta la helay iyo dhiibo faallooyin.
Sidee loo bilaabaa amarro iyo lacag bixinta?
Waxaad noo soo diri kartaa amarkaaga iibsashada haddii aad haysato, ama u dirto xaqiijin sahlan oo ay soo diraan email ama Maareeyaha Ganacsiga, markaa waxaan kuu soo diri doonaa Proforma Invoice faahfaahinta bangigaaga si aad u xaqiijiso bixinta codsiyadaada.
Tusaale ahaan la heli karaa?
Haa, alaabooyinka qaar ayaa loo soo diri karaa shaybaar lacag la'aan ah, laakiin markaad bixiso qarashka maraakiibta.
Sidee loo hubiyaa tayada alaabta ka hor inta aan la siin amarada?
COA, HPLC, HNMR ayaa la heli karaa.
Waraaqaha imtixaanka ee shaybaarada dhinac saddexaad ayaa la siin doonaa waqti mar.
Sidee loo damaanad-qaadayaa lacagtaydu?
Amar kasta oo naga mid ah budada cayriin waa la soo celin karaa ka hor inta aan la soo dirin alaabta.
Dhammaan lacag bixinta AASraw, waxay ku balan qaadayaan in ay ka noqdaan, bixiyaan, kala wareejiyaan, ama wax kasta oo aan ku sameyn karno sannadka 5.
Sidee ku saabsan wakhtiga umusha?
1 ~ 3 maalmaha ka dib bixinta lacagta. (Fasaxa Shiinaha ee aan ku jirin).
Ma xaqiijin kartaa helitaanka sahayda?
Waxyaalaheena ceymiska ah ee wareshada ayaa la abaabulay lagana maamuley nidaam, kaas oo damaanad qaadaya helitaanka waqtiga.
Miyaadan ogeyn macluumaadka sheyga?
Wixii faahfaahin ah ee alaabta, waxaad arki kartaa our faahfaahin wax soo saarka iyo maqaalo blog Waxaa jiri doona jawaabo wanaagsan